jeudi, 11 avril 2019 20:41
Ireo gadra 3 voasambotra tany Maroantsetra
jeudi, 11 avril 2019 17:55
Fantatrao ve: Ahoana ny hikajiana ny isan'ny seza azon'ny depiote
Atao ny 27 mey ho avy izao ny fifidianana Solombavambahoaka eto amintsika.
Ny lalàna no namaritra fa mahazo depiote 1 isaky ny mponina miisa 300 000.
1- Ho an'ireo Distrika depiote tokana, dia fifidianana no atao, ka izay mahazo vato ambony indrindra amin'ny fihodinana tokana ihany dia mandresy, mahazo ilay sezan'ny depiote ao amin'io Distrika io.
2- Ho an'ireo izay miady depiote 2 kosa, dia izay mahazo isa ambony indrindra, dia mahazo ny seza voalohany.
Raha tsy mahatratra ny (atsasaky ny vato + 1) azon'ilay lisitra voalohany kosa ny kandida lisitra faharoa, dia avy hatrany dia lasan'ilay lisitra voalohany avokoa ny seza faharoa.
jeudi, 11 avril 2019 17:46
Maroantsetra: Gadra nitsoaka, 1 matin'ny Fokonolona, 3 azo sambobelona
Voasambotra androany ny telo tamin'ireo voafonja enin-dahy nandositra ny alin'ny talata 9 aprily. Matin'ny Fokonolona kosa ny iray.
Mitohy ny fikarohana ireo roalahy ambiny.
Mitaky amin'ny mpitondra fanjakana ny mponina ny hanaovana peta-drindrina sy fanelezana amin'ny haino aman-jery sy tambazotra sosialy ny sarin'izy ireo anafaingana ny fisamborana azy.
Leom-boananana ny mponina aty Maroantsetra taorian'ireny zava-nitranga nahamaizana tranona polisy maro teto an-toerana ireny.
jeudi, 11 avril 2019 17:07
Antalaha aéroport: Nitohy ny Tagnamaro, nanampy irero mpandraharaha
Mitohy ny fanaovana asantagnamaro tety amin'ny aéroport Antalaha, ary nisy ireo mpandraharaha nanome tanana amin'izany, anisan'izany ity iray nampindrana tracteur hanadiovana ny manodidina ny piste rehetra.
Madio tanteraka ny piste aéroport ankehitriny.
Anisan'ny hetahetan'ny mponina aty Antalaha ny hisian'ny sidina Tsaradia, satria dia tsy latsadanja amin'ny piste manodidian ny Faritra SAVA no misy eto Antalaha, nefa hatreto dia tsy misy eritreritra ny hanao izany ireo tompon'andraikitra.
jeudi, 11 avril 2019 16:46
Loza an-dranomasina: Avotra izy 18 tao amin’ny sambo « Anilla »
Niala tao Antsiranana omaly tamin’ny 9 ora alina, ny sambo « Anilla » ary hiazo an’i Vohémar. Tra-doza teny amin'ny fari-dranomasin’i Vohémar anefa ilay sambo, nisy lavaka anankiroa ilay sambo ka nampidi-drano.
Nandefa vedety avy hatrany hamonjena ireo olona tao anaty sambo ny APMF Vohémar, vantany vao nahazo fampilazana.
Nafindra tamin’ireny lakana plastika abontsina amin’ny rivotra ireny miisa anankiroa izy ireo, ary ny onjan-dranomasina no nanosika niazo ny morona tao Anjiamangotro, Kaominina Ampisikina, Distrika Vohémar. Lakan’ny mpanjono indray no nitatitra tsikelikely azy ireo namonjy torapasika.
Tantsambo miisa 12 miampy mpandeha 6 no tao anatiny, ary avotra soamantsara tafakatra an-tanety avokoa, androany tamin’ny 4ora sy sasany maraina.
jeudi, 11 avril 2019 16:36
Rovan’Antananarivo: Natomboka androany ny famitàna ny asa fanarenana
May kila hotohoton’ny afo ny harivan’ny 6 novambra 1995 ny tao Anatirova. Tsy nambara ho fanta-bahoaka hatramin’izao ny tompon’antoka tamin’izany.
Nahazo tombony amin’ny fizahana maso sy fizarana solomaso maimaimpoana, avy amin’ny fikambanana tsy miankina any Vardoise Frantsa, ny mpianatra ao amin’ny EPP FJKM Rasalama, Boriboritany faha-III Antananarivo Renivohitra. Ankizy mpianatra 100 mahery ao amin’ity sekoly ity no nisitraka izany.
Hitohy ary hahazo izany fiahiana sosialy mahakasika ny maso izany koa ny mponina ao amin’ny Boriboritany faha -III, ka ny herinandro ho avy io no ho tontosaina izany fizahana maso sy fizarana solomaso maimaimpoana izany, hetsika izay tafiditra indrindra amin’ny vinan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana ny amin’ny fiahiana ara-tsosialy ny mponina, ao anatin’izany ny vehivavy sy ny ankizy.
jeudi, 11 avril 2019 15:30
Sambava: Nahazo fampitandremana ireo midobo ny tanin’ny Lycée Mixte
« 3ha amin'ny tany nirefy amin'ny 15ha sisa izao amin'ity tanin’ny Lycée Mixte ity » hoy i Sibo Jean Paul ary Randria Norbert (Chef Cisco teo aloha) izay nitsangana hiaro hatramin'ny farany ity fananana ho an’ny taranaka ity.
Efa hatramin'ny taona 1996 no nanomboka ny fidiran'olona an-keriny tato amin’ny faritry ny sekoly fa mbola voalamina, fa amin'izao dia izahay samy mpanabe na mpampianatra ato, izay tokony hiaro, no mivarotra amin'ny hafa, ka lasa mananosarotra ny raharaha hoy ihany izy ireo.
Manontany tena izahay hoy ireto fa tsy sahy mandray andraikitra amin'ity ny tompon'andraikitra eto an-toerana koa avela ho lafo avokoa ve ny tokontan-tsekoly izay vao hikoropaka satria tsy mitsaha-mitombo isa ireo izay miditra ?
jeudi, 11 avril 2019 15:26
Fanondranana olona hiasa any ivelany: Tsy misy intsony fahazoandalana any amin’ireo firenena tsy ahitana masoivohom-pirenena Malagasy
Tapaka nandritry ny filankevitry ny minisitra omaly fa hihamafy ny sazy azon’ireo manondrana antsokosoko ireo mpiasa malagasy makany ivelany, ary ireo izay rehetra fantatra fa nandefa ireto teratany malagasy nampodiana ka niharan’ny herisetra, na tsy nandray ny tambin-karamany.
Tsy misy intsony fahazoandalana hiasa makany ivelany makany amin’ireo firenena tsy ahitana masoivohom-pirenena Malagasy, sy any amin’ireo toerana tsy manaja ny zon’olombelona ary any amin’ireo firenena tsy manana fehezandàlana mifehy sy manaja ny zo maha olona ny isambatan’olona.
Hisy ny laharana an-tariby manokana entina ahafahan’ny rehetra mifandray mivantana amin’ny tomponandraikitra manoloana ny kolikoly sy ny fanakanana tsy amin’antony atao ireo tera-tany malagasy miditra sy mivoaka eo amin’ny seranampiaramadina rehetra iraisam-pirenena.
Ireo mpiasa malagasy manana taratasy ara-dàlana izay efa miasa any ivelany kosa dia afaka mivezivezy malalaka eto antanindrazana.
ONN: Solofonirina Lucie no Mpandrindra nasionaly vaovao
Notendrena nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly ity Mpandrindra nasionfaly vaovaon’ny Ofisy nasionaly misahana ny fanjariantsakafo (ONN) ity araka ny tolokevitry ny Praiminisitra.
Mandimby toerana an’i Ambinintsoa Raveloharison izay mpandrindra nasionalin’ny ONN teo aloha i Solofonirina Lucie.